किन हुन्छ मधुमेह (सुगर) ? के हो यसको उपचार र रोकथाम ? – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
किन हुन्छ मधुमेह (सुगर) ? के हो यसको उपचार र रोकथाम ?
प्रकाशित मिति : २०७४ कार्तिक २८
मानसिक तनाव, खानपानमा पश्चिमाकरण, शारीरिक परिश्रमको कमी लगायतका कारणले नेपालमा मधुमेह रोगीको संख्या बढ्दो छ । हरेक नोभेम्बर १४ तारिखमा विश्वभर मधुमेह दिवस मनाइन्छ । नेपालमा पनि करीब २५ लाख जनसंख्या मधुमेहबाट प्रभावित भएको आकलन गरिसकिएको छ । नेपालमा मधुमेहबाट प्रभावित २५ लाखमध्ये करीब ९७ प्रतिशत वयस्क उमेरका छन् । मोटोपना र उच्च रक्तचाप भएका शहरी बासिन्दालाई मधुमेह हुने सम्भावना बढी हुन्छ । परिवारमा कोही मधुमेह प्रभावित छन् भने त तन्दुरुन्त युवा पनि जोखिममा हुन्छन् ।
शरीरमा इन्सुलिन उत्पादन नहुँदा वा इन्सुलिनको काममा अवरोध हुँदा रगतमा चिनीको मात्रा बढ्ने समस्यालाई मधुमेह भनिन्छ । मधुमेह भएका व्यक्तिको शरीरमा बोसो र प्रोटिन टुक्रिने क्रिया पनि प्रभावित हुन्छ । मधुमेहले शरीरको हर अंगलाई असर र्पुयाउँछ । लामो समयको मधुमेहले आँखालाई बढ्ता असर गर्छ । चाँडै मोतिविन्दु हुनु, रेटिनामा समस्या आउनु र अन्धोपना यसका उदाहरण हुन् ।
मधुमेहले एकातिर रक्तचाप, मुटु दुख्ने र हृदयघात निम्त्याउँछ भने अर्कोतिर मिर्गौलाको कार्य क्षमतालाई असर गरी प्रोटिन खेर फाल्ने गराउँछ । जीउ सुन्निने हुँदाहुँदै मिर्गौलालाई काम नलाग्ने गराउँछ । मधुमेहले मस्तिष्क र स्नायु प्रणालीमा असर गरी संवेदनाको कमी गराउने, रिंगटा लाग्ने, स्मरण शक्ति ह्रास र पक्षघात पनि गराउन सक्छ । पहिलो प्रकारको मधुमेहले प्यान्क्रियाज ग्रन्थिको इन्सुलिन उत्पादन कोष नष्ट गराउँछ । यस्तो खालको मधुमेह कलिलो उमेरमै देखा पर्छ । यो वंशाणुगत पनि हुन्छ । यस्तो मधुमेह रोक्न सकिंदैन । उपचारमा इन्सुलिन नै चाहिन्छ ।
दोस्रो प्रकारको मधुमेहमा इन्सुलिनको कार्य क्षमतामा कमी आउँछ । मोटोपना भएका वयस्क महिलामा यो खालको मधुमेह देखा पर्छ । यसको उपचारमा औषधि सेवन र जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
कारण र उपचार
हामीले खाएको खाना आमाशयमा पुगेपछि विस्तारै पचेर ग्लुकोजमा परिणत हुन्छ । यही ग्लुकोज आन्द्राबाट सोसिएर रगतमार्फत शरीरका कोषहरूमा पुग्छ । कोषहरूमा ग्लुकोज र्पुयाउन प्यान्क्रियाजले उत्पादन गर्ने इन्सुलिनले सहयोग गर्छ । तर, मधुमेह हुँदा कोषले रगतमा रहेको ग्लुकोज लिएर शक्ति प्राप्त गर्दैन । रगतमा पनि चिनीको मात्रा बढ्न जान्छ । रगतमा चिनीले निश्चित मात्रा नाघ्यो भने पिसाबमा ग्लुकोज देखिन थाल्छ ।
यसैले पहिले खुल्ला ठाउँमा पिसाब गर्दा कमिला झुम्मियो भने (मधुमेह) रोग लागेको शंका गरिन्थ्यो । मधुमेह पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिंदैन, नियन्त्रणमा राख्न मात्र सकिन्छ । त्यसका लागि नियमित आहार, व्यायाम, इन्सुलिन वा औषधि सेवन गर्नुपर्छ । मधुमेह प्रभावित व्यक्तिले हिंड्ने र व्यायाम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । त्यसो गर्दा शरीरका कोषहरूले ग्लुकोजको खपत बढाएर रगतमा ग्लुकोजको मात्रा घटाउँछ । एक अध्ययन अनुसार, आधा घण्टामा तीन किलोमिटर हिंडे १३५ क्यालोरी खर्च हुन्छ भन्ने देखाएको छ । त्यस्तै, साइकल चलाउँदा २०० क्यालोरी खर्च हुन्छ भन्ने छ । भोको पेटमा बिहानै योगाभ्यास गर्नु मधुमेहका लागि प्रतिकूल मानिन्छ । मधुमेह रोगीका लागि उपयुक्त खाना र व्यायाम अत्यन्त आवश्यक छ । उपवास बस्नुहुँदैन, निश्चित समयमा खाना खाने बानी बसाउनुपर्छ ।
सागपात, काँक्रो, गोलभेंडा, प्याज, लसुन, कागती, चना वा गहुँको पीठोको रोटी बढी फाइदाजनक हुन्छ । ठिक्क मात्रामा नरिवल, काजु जस्ता ड्राईफ्रूट्स, मासु, अण्डा खानुपर्छ । मेथी र करेला मात्र खाएर जीवनलाई कष्टकर बनाउनुहुँदैन । नून, चिनी, घ्यू, तेल, दुग्ध पदार्थ, मेवा, मिठाई, आइसक्रिम, चकलेट चाहिं सकेसम्म खानुहुँदैन । धूमपान, मद्यपान पनि गर्नुहुँदैन । मधुमेह प्रभावित व्यक्तिले रक्तचाप, रगतमा चिनी, बोसो (कोलेस्टेरोल) र मिर्गौलाको कामगराइको नियमित परीक्षण गराउनु त अनिवार्य नै हुन्छ । त्योसँगै आँखा र मुटु परीक्षण गराउनुपर्छ ।
मधुमेहले नसामा असर गर्दा घाउचोट लागेको थाहा हुँदैन, यसको हेक्का राख्नुपर्छ । भोकै बस्दा शरीरमा रगतको मात्रा स्वाट्टै घटेर जटिल स्थिति आउन सक्छ । सामान्य तौल भएका मानिसलाई २००० देखि २५०० किलो क्यालोरी प्रतिदिन र मोटोपना भएकालाई १२०० देखि १८०० किलो क्यालोरी डाइट प्रतिदिन आवश्यक पर्छ । त्यसमा कार्बोहाइड्रेट ५० प्रतिशत, प्रोटिन २० प्रतिशत र चिल्लो पदार्थ २५ देखि ३० प्रतिशत हुनुपर्छ । खाना रेसादार हुनुपर्छ । एकैपटक धेरै खाना खानुभन्दा पटक–पटक खाँदा राम्रो हुन्छ ।
खाली पेटमा केही दिन ल्वाङको पानी खाँदा यस्ता फाइदा
आयुर्वेदिक रुपले निकै अब्बल मानिने ल्वाङलाई मसलाका...
Jiwan saili Read More
कब्जियत के हो ? यसबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यस्तो छ सफल आयुर्वेदिक उचार विधि
पाचन प्रक्रियाको गडबडीको कारण उत्पन्न हुने एक रोग...
किन आँखाबाट पानी बग्छ
काठमाडौं । हाम्रो आँखामा एउटा आई लिड भन्ने चिज हुन्छ,...
ब्रेन ट्युमरका सामान्य १० लक्षण केके हुन् त ?
ब्रेन ट्यूमर एक गम्भीर समस्या हो । समयमै रोग पत्ता...
अस्पतालको चरम लापरवाही आइरन चक्की दिनुपर्ने गर्भवतीलाई जुकाको औषधी
म्याग्दी, फागुन १५ । म्याग्दीको बेनी अस्पतालको औषधि...
Jiwan saili, mainNews, National News ... , Read More
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी अटो मेकानिक्स श्रमिक मजदुर संघ काठमाडौंको जिल्ला सम्मेलन सम्पन्नः अध्यक्षमा घिमिरे
१२९ औं मई दिवसको अवसरमा क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघले जारी गरेको अपील
लेनिन जयन्तीको अवसरमा ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न’ क्रान्तिकारी माओवादीको विशेष अपील
पार्टी संगठनबारे लेनिनका विचारहरु
आज लेनिन जयन्ती, क्रान्तिकारी माओवादीद्वारा विशेष कार्यक्रमको आयोजना